news | news – Laugh Nepal Nepal
डलरको भाउ वढेको बढ्यै, हेर्नुस आज कति पुग्यो ?
२० भदौं । डलरको भाउ झनै महंगो भएको छ ।
आज १ डलरको नेपाली बजार भाउ १ सय १४ रुपैयाँ ८४ पैसा पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले अमेरिकी डलर १ को खरिद दर १ सय १४ रुपैयाँ २४ पैसा र बिक्रीदर १ सय १४ रुपैयाँ ८४ रुपैयाँ तोकेको छ ।
यसअघि गएको गएको शनिबार डलरको भाउ १ सय १३ रुपैयाँ ८९ पैसा पुगेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डलरको माग बढेको र डलरको तुलनामा भारतीय मुद्रा निक्कै कमजोर भएकाले नेपाली बजारमा पनि डलरको भाउ बढेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
अमेरिकी अर्थतन्त्र मजबुत बन्दै गएकाले पनि डलर महंगो हुँदै गएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
कालिमाटी तरकारी बजारमा सोमबार दिनभर तनाव भयो । व्यापारीले चरम कालोबजारी गरेको सूचना पाएपछि मिर्मिरेमै वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका अधिकारी बजार अनुगमनमा पुगे ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवको ठाडो निर्देशनमै अनुमगमन टोली पुगेको थियो । तर, विभागका अधिकृत दीपकराज पोखरेल नेतृत्वको उपभोक्ता अधिकारकर्मीको टोलीलाई अनुगमन सहज भएन । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा यो समाचार छापिएको छ ।
अनुगमन समितिले कालिमाटीमा तरकारी ल्याइने मुख्य जिल्लाका किसानको खेतमै पुगेर अनुगमन गरेको थियो । धादिङ, मकवानपुर, ललितपुरलगायत जिल्लाका किसानले खेतबाट बेच्ने तरकारीको मूल्य र कालिमाटी बजारमा उही तरकारीको मूल्यमा व्यापक अन्तर भेटिएको छ ।
‘कृषकको खेतबाट १८ रुपैयाँदेखि ३५ रुपैयाँसम्ममा काउली बेचिएको पाइयो,’ वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका अधिकृत दीपकराज पोखरेलले भने, ‘त्यही तरकारी कालिमाटी बजारमा आइपुगेपछि १ सय १० रुपैयाँ प्रतिकिलोसम्म बेचिएको पाइएको छ ।’
किसानको खेतदेखि तरकारी बजारसम्म आइपुग्दा तरकारीको मूल्य चारगुणासम्म बढेको पाइएको अनुगमन टोलीमा सहभागी उपभोक्ता अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले बताए ।
‘तरकारी व्यापारका बिचौलियाको धेरैवटा तह पाइएको छ,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा तरकारी उत्पादक किसान र उपभोक्ता दुवै ठगिने तथा बिचौलियाले मात्र अनुचित लाभ कमाउने अवस्था देखिएको छ ।’
सिधा प्रश्न कार्यक्रम बन्द गर्ने संचारमन्त्रिलाई बोलाएर सिधा कुरा गर्दै रबि लामिछाने (भिडियो हेर्नुहोस)
१ किलो साग किन्न ५० किलो पैसा लानु पर्ने देश हेर्नुहोस्
लाखौँ डलर तिर्दा पनि एकमुठा साग समेत किन्न नसकिने देशका अभागी जनता, झोला भरी पैसा लिएर बजार गयो फर्किदा झोलाको पीदमा समान हुन्छ ! कुन देश होला त्यो ? तपाइले पक्कै पनि यस्तो देशको बारेमा सुन्नुभएको हुनसक्छ । जहाँ बजारमा सामान किन्न जाँदा बोरा भरि पैसा कोचेर जानु पर्छ र घर फर्किदा १ किलो सामान लिएर फर्किनु पर्छ । अर्थात सामानको तौल भन्दा पैसाको तौल धेरै तिर्नु पर्ने देश ।
यो देशको नाम हो जिम्बाबे, जिम्बावेमा सबै कुरा एकदमै महँगो छ, यो महंगी निर्वतमान राष्ट्रपति रोबर्ट मुगाबेको अदूरदर्शी निर्णय तथा कदमको कारण हुन गएको हो । अहिले पनि यहाँका सबैभन्दा गरिब मानिसहरुको साथमा करोडौं डलर हुने गर्छ । तरै पनि उक्त पैसाले आफुलाई चाहिने सामान खरिद गर्न सक्दैनन् । किनकि यो देशको पैसाको भ्याल्यु निकै कम छ । कुनै समय ५ अमेरिकी डलर बराबर एकहजार लाख करोड जिम्बावे डलर हुन्थ्यो ।
यस्तो हुनुमा त्यहाको सरकारको अदूरदर्शी निर्णय थियो । सन् १९८० तिर आर्थिक मन्दीको समयमा जब उनीहरु सित पैसाको कमी हुन लाग्यो त्यतिबेला सरकाले अन्धाधुन्ध पैसा छापे र जनतालाई बाडीदिए । जसको फलस्वरूप जनतासंग खानेकुरा भन्दा पैसा धेरै हुन गयो र धेरै पैसा तिरेर मालसामान किन्न लागे र पैसा धेरै भएकै कारण बिस्तारै बिस्तारै सानो सानो सामान खरिद गर्नको लागी पनि झोलाभरि पैसा बोकेर जानु पर्ने स्थिति सिर्जना भयो ।
पैसाको अभाव भएको बेला जिम्बावेको सरकारले पैसा छाप्नु भन्दा पनि अन्नपानी/मालसामानको उत्पादनमा ध्यान दिएर जनतालाई पुर्याउन सकेको भए यस्तो स्थिति सिर्जना हुने थिएन । त्यसैले जिम्बावेको यो घटनाले पैसा नै सबै थोक होइन भन्ने पाठ सिकाएको छ ।
जिम्बावेमा पैसाको मूल्य घट्ने क्रम सन् १९८० देखि २००९ सम्म लगातार चलिरह्यो । जसलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न सम्भब थिएन त्यसैले उसले अमेरिकी डलर, रसियन डलर, जापानी एन, चाइनिज युआन, इन्डियन रुपैयाँ, साउथ अफ्रिकी रेंड जस्ता मुद्राहरुको औपचारिक प्रयोग गर्न थाल्यो, र अहिले आएर यो देशले बिटक्वाइनलाई पनि मान्यता दिएर मौद्रिक कारोबार गरिरहेको छ ।
नेपाल आइडलबाट बाहिरिएपछी अंकित परियारको पहिलो गीत सार्वजनिक (भिडियो सहित )
पछील्लो समय नेपाल आइडल सिजन २ बाट बाहिरिएपछी गायक अंकित परियार एकाएक युट्युब लगायतका सोसल मिडियाहरुमा भाईरल बने ।स्वर राम्रो हुँदाहुँदै पनि बाहिरिएपछी धेरैले नेपाल आइडल सिजन को बिरोध गरे र अंकित परियारलाई सहयोग र सपोर्ट गर्ने हातहरु पनि आए ।
यसैक्रममा उन्ले उस्ले मलाई उस्को बिहे बोलको गीत गाउँने अबसर पाएका छन जसमा शब्द संगीत राज कुमारको रहेको छ भने अडियो भिडियोलाई एक्का कम्पनिले बजार ब्यबस्थापन गरेको छ ।नेपाल आइडल बाहिरिएबाट पछी यो उन्को पहिलो गीत हो ।
हेर्नुहोस, मुटु काम्ने भिडियो । ३ करोड नेपालीको रगत उमाल्ने भिडियो बाहिरियो । भिडियो सहित
काफल किन खाने, थाहा पाऔ यसका फाइदा
काफल एक लोकप्रिय पहाडी फल हो । यो गर्मी याममा पहाडका वन पाखाहरूमा पाकेको हुन्छ । यसको फलको आकार लाम्चो र गोलो आकारको हुन्छ। यसको स्वाद अमिलो मिठो हुन्छ। यसको फलको रंग काँचोमा हरियो हुन्छ । पाकि सकेपछी रातो र धेरै पाकेपछि बैजनी रंगको हुन्छ । पहाड तिरका मानिसहरू गर्मी याममा काफलको रूखमा चढेर काफल खानमा तल्लिन रहन्छन् । काफललाई हामीले फलको रुपमा मात्र प्रयोग नगरेर यसलाई औषधीको रूपमा समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ । थाहा पाऔ काफलका औषधीय गुणहरू…
– कर्णशूलमा: काफलको बोक्राको काढा तिलको तेलमा पकाई तेल मात्र रहेपछी चीसो पारेर दुई तीन थोपा तेल कानमा चुहाए कर्णशुल र पीप बग्ने तथा बहिरो हुन खोजेको पनि निको हुन्छ । – अतिसारमा: तीन गर्ाम काफलको बोक्रा र तीन ग्राम बालो बेलको काढा पकाई एक-दुई ग्राम तीन-चार पटक पिए अतिसारमा आराम हुन्छ । – मासिक धर्ममा: कैसर, कालो तिल र पुरानो गुड(शक्कर) र काफलको बोक्रा मिलाई काडा पकाएर पिलाए मासिकधर्म सम्बन्धी कष्ट आराम हुन्छ । यो औषधी खानासाथ अन्य खानेकुरा दिनुपर्छ ।
– नेत्र रोगमा: काफलको बोक्रा मसिनु पिधेर आँखा रातो भएमा र आँखा बिझाएमा अन्जनजस्तै लगाइदिए लाभ हुन्छ ।
– घाऊ-चोटमा: बिग्रेको र चाँडै निको नहुने घाउमाकाफलको बोक्राको धूलो छरिदिए र त्यसैको काढा पकाएर प्रतिदिन धोईदियो भने निको हुन्छ ।
– नपुंसकतामा: काफलको बोक्राको धुलो भैशीका दूधमा पिँधेर सुत्ने बेलामा मणीको भाग छाडेर लिंगमा लगाई सुत्ने र बिहान ऊठेर धुने । यस प्रक्रिया केही दिनमै यौवन फर्केर आऐ झै हुन्छ । हस्तमैथुन गरेर आएको नपुंसकतामा पनि यसले लाभ गर्छ ।
– टाउको दुखाईमा: काफलको धूलो पारेर त्यसको नश लिए शिरको पिडा निको हुन्छ ।
– दममा: काफलका बोक्राको काढा पाँच ग्राम चीनी वा मिश्री मिलाएर पिउनाले खोकी, दम, हृदय रोग, अपच र अरूचीमा पनि लाभ गर्दछ ।
– पेट दुखेमा: काफलको बोक्रा चार ग्राम मिश्रीको काढासित चार दिन सेवन गरे जुनसुकै कारणले पेट दुखेको वा शुल भएको भए पनि आराम हुन्छ ।
– दन्त पिडामा: काफलको बोक्रा पिसेर त्यही धूलोले मञ्जन गर्ने गरे दाँतको पिडा शान्त हुन्छ । तीन दिनमा विसेक भएन भने नून मिसाएर मञ्जन गर्ने र त्यसको काढा पकाएर मनतातो बनाएर कुल्ला गर्ने गरे लाभ हुन्छ ।
आश्मा विश्वकर्माको ‘डामे तु कोसिता’ ले गर्यो कमाल,देश विदेश बाट तारिफ नै तारिफ, २० दिनमै एक करोड भ्युज यदि तपाईहरु पनि भिडियो हेर्न छुटाउनु भएको छ भने हेर्नुहोस र सक्दो सेयर गर्नुहोस
जानकी मन्दिर र रंगभूमि मैदानमा अढार्इ सय भारतीय फौज, सर्वसाधरणलार्इ प्रवेश निषेध, विश्वले नै पत्याएका गोर्खाली सुरक्षा निकायलाई मोदीले किन अविश्वास गरे ? (भिडियो हेर्नुहोस)